Indlu yaseMonte Terminillo
Indawo yam yokuhlala iseMonte Terminillo inombono omangalisayo wentaba kunye nentlambo, kufutshane nasekuqaleni kokuphakanyiswa kwe-ski kunye nemoto yekhebula. Ungathanda ukuba indawo yam yokuhlala yindlu yeentaba eqhelekileyo, eqaqambileyo, indawo ezinkulu ezingaphandle, iibhedi ezininzi, indawo yomlilo, ibalcony, ithala kunye negadi, ukuzimela ngokupheleleyo ngelixa usembindini wedolophu. Indawo yam yokuhlala ifanelekile kubadlali bezemidlalo, izibini, iintsapho (nokuba nabantwana), amaqela amakhulu, abahlobo abanoboya (izilwanyana ezifuywayo).
SiseMonte Terminillo, kwi-1600 m asl. , Ifulethi elizimeleyo kwindlu encinci yentaba, indawo ekhululekile kunye nempawu, kwimigangatho emi-2, kumgangatho ophantsi ukufikelela ngokuzimeleyo kunye ne-terrace enkulu yangasese kunye nezitepsi zokufikelela kumgangatho wokuqala, kumgangatho wokuqala igumbi lokuhlala elikhulu elinokwahlulwa ukwenza elinye igumbi lokulala, indawo yomlilo, i-balcony, i-kitchenette, igumbi lokulala, igumbi lokuhlambela, ekugqibeleni kumgangatho we-attic igumbi elikhulu le-attic elinemiqadi yokhuni eveziweyo (nikela ingqalelo entloko kwiindawo ezisezantsi). Okunokwenzeka kunye nesongezelelo esincinci sokuba neendawo zokupaka ezigqunyiweyo kunye nokusetyenziswa kwe-SPA ye-4 * Ihotele ekufutshane. Umbono uhle kakhulu ngokubhekisele kwiNtlambo yaseRieti nakwincopho yeMonte Terminillo. Indawo lusembindini kakhulu kwaye kwindawo sobuchule zombini zokuthenga kunye nezemidlalo, nje amanyathelo ezimbalwa ukususela ekuqaleni zombini longele kunye Ukuskiya cross-lizwe izibonelelo, kufuphi kukho imikhondo ehla ehlotyeni, ukukhwela ihashe, kodwa ngenxa snowshoeing ebusika okanye ukutyibilika intaba, kukho iindlela ezininzi zokukhwela ibhayisekile intaba, uhambo lwezithuthuthu ezine-quad kunye nezithuthuthu ze-enduro, kunye nezikhokelo zasekhaya kunye nabatshabalalisi.
I-Terminillo yenye yezona ntaba ziphakamileyo kumbindi we-Apennines, idolophu ikwi-1650 yeemitha ngaphezu komphakamo wolwandle. ngelixa ingqungquthela i-2216, iimbono ezibanzi zombini ukuya kwintlambo yaseSanta Reatina kunye ne-4 hermitages yaseFrancisca, kunye ne-Leonessana Valley, kunye neembono ezikuvumela ukuba ubone izibane zekomkhulu, uLwandle lwaseTyrrhenian kunye noluhlu lweentaba zeGran Sasso. Imidlalo emininzi inokuqhutywa, ebusika njengokutyibilika kwi-alpine, ukukhwela ikhephu, ukukhwela intaba, ukutyibilika ekhephini, ukutyibilika ekhephini, kodwa kunye nokuhamba ngekhephu, ehlotyeni njengokukhwela iHashe, ukuhamba ngeendlela ze-CAI, uhambo oluya kwiMountain Bike, iQuad kunye nezithuthuthu ze-Enduro nazo. kunye Izikhokelo zendawo, abahlohli kunye nezithuthi eziqeshisayo
Ndiya kuba nakho ngexesha lokuhlala kwabo kuyo nayiphi na imfuno, iingcebiso okanye uncedo.